Madasha Xisbiyada Qaran oo $200,000 ugu deeqay gar-gaarka fatahaadaha
Madasha Xisbiyada Qaran ee mucaaradka Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku deeqeen lacago ay ku gargaarayana dadka ay saameeyene abaaraha.
Hadalka ay warbaahinta siiyeen ayaa Madasha Xisbiyada Qaran waxay ku sheegeen inay ku deeqeen lacag dhan $200,000 doollar oo loo gacangeliyey guddiyada gargaarka dadka ay fatahaaduhu ku saameeyeen gobollada dalka.
Dhinaca kale, wafdi ka socday mucaaradka oo tegi lahaa magaalooyinka Beledweyne iyo Bardaale ayaa la sheegay inay maanta baaqdeen kadib markii roobab hor leh ay ka da'een goobahaasi taasi oo suurto geli weyday in diyaaraduhu degaan, sida sarkaal ka tirsan mucaaradka uu u sheegay warbaahinta.
Dhinaca kalena, hay’adda caruurta Qaramada Midoobay ee UNICEF ayaa sheegtay in daadadka Soomaaliya ay saameeyeen 200 kun oo carruur ah gaar ahana magaalooyinka Beledweyne, Bardaale, Baidoa, Jawhar iyo Mahaddaay.
UNICEF ayaa ka digtay in carruurtu ay si gaar ah u nugul yihiin xilliyada xaalada ay jiraan xaaladaha deg degga ah. Kumannaan kun oo qof ayaa guryahoodii ay ka bara kaciyeen daadadku sida ay sheegtay UNICEF.
Jamaal Axmed Cismaan, ayaa deeqda ay Madasha Xisbiyada Mucaaradku ku dhawaaqeen ka wareystay senator Ilyaas Xasan Cali oo ka tirsan madasha xisbiyada qaran.
Wareysiga senator Ilyaas